Ifayibha Optical Splice Ukuvalwa Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Fibre Optical Splice Ukuvalwa Factory
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice (FOSC) okunye okubizwa ngokuthi ukuvalwa kwe-fiber optic splicing, kungumshini osetshenziselwa ukuhlinzeka isikhala nokuvikelwa kwezintambo ze-fiber optic ezihlanganiswe ndawonye ngesikhathi sokwakhiwa kwenethiwekhi ye-loop fiber optic network Ingasetshenziswa ngaphansi komhlaba, i-aerial, ukukhweza udonga, imizila yokufaka amapali nemigwaqo.
Ngokusho kwezicelo ezahlukahlukene, kunezinhlobo ezimbili zokuvalwa kwe-fiber optic emakethe yabasebenzisi abangayikhetha: Ukuvalwa kohlobo oluvundlile lwe-fiber optic nokuvalwa kohlobo oluqondile kwe-fiber optic.
Ukuvalwa kohlobo lwe-fiber optic okuvundlile kufana nebhokisi eliyisicaba noma eliyindilinga, lolu hlobo lokuvalwa lusetshenziswa kakhulu ekwakheni udonga, ukufaka amapali nokungcwaba ngaphansi komhlaba. Vertical type fiber optic ukuvalwa okubizwa nangokuthi i-dome type fiber optic ukuvalwa, kufana nedome futhi ngenxa yesakhiwo sedome kwenza kube lula ukuthi kusetshenziswe ezindaweni eziningi.
IJear FOSC yenziwe ngebanga lokuqala leplastiki elimele i-UV futhi lihlanganiswe nophawu oluqinisekisa isimo sezulu nobufakazi bokugqwala, okunikeza ukusebenza ngokuzethemba noma kungaphezulu noma kungcwatshwe ngaphansi komhlaba ngesikhathi sokwakhiwa kwenethiwekhi ye-FTTX.
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice kungafakwa ngamabhawodi noma imichilo yensimbi engagqwali kalula, zonke izesekeli ezifanele ziyatholakala ebangeni lemikhiqizo ye-jera, sicela ukhululeke ukuxhumana nemininingwane yesikhathi esizayo.
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, i-FOSC-2D, amalunga we-48
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, i-FOSC-3, amalunga we-96
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, i-FOSC-4 (144)
Ukuvalwa kwe-Ftth Fiber optic splice, i-FOSC-5 (96)
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, i-FOSC-8 (12), i-8 fibe ...
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice 4 amalunga, FOSC-9 (4)
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, i-FOSC-7 (96)
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, i-FOSC-6 (96)